Olericulture | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Momba ny tombontsoa sy ny fomba fikarakarana zana-trondro mavo. Inona no salady matsiro azo atao amin'ny vary, anisan'izany ny fitahirizana sakafo?
Meksika dia avy any Meksika. Nisy foko sasany nanompo azy ary nankalaza ny fijinjany tamim-boninahitra. Antsoina hoe mpanjakavavin'ny tany isika. Amin'ny sakafo dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra izy noho ny toetra mahasoa azony, mifanaraka tsara amin'ny zavatra hafa, ny lanjan'ny sakafo ary ny famarotana avo lenta.
Fikarakarana ny trano fonenana ao an-trano: Manao ahoana ny habetsahan'ny Corn on the Cob?
Voa nangotraka. Avy amin'ireo teny ao am-poko ireo dia lasa hafana sy faly, toy ny tamin'ny fahazazany, raha maro no nijanona nandritra ny fahavaratra tao an-tanàna ary nihinana tamim-pitandremana ny fitondran'ny renibem-pitandremana tsara. Ary mbola mamafy sira, tsarovy? Ny fotoan'ny renibeny dia lasa, fa tsy ny mpivady rehetra mahafantatra ny fomba mahandro tsara, mitazona ny toetra mahasoa, ny fahamendrehana ary ny fahamamoana.
Fomba firy sy fotoana firy hanamboarana varimbazaha iray ao anaty varim-bazaha Bonduel?
Ny mpanjifa efa simba dia manana karazana serealy goavam-be. Ao amin'ny toeram-pivarotana sy toeram-pivarotan-tserasera ianao dia afaka mahita izay tian'ny fonareo: kotsan'ny fahasalamana samihafa sy karazana varimbazaha isan-karazany, voankazo ary voankazo, ary koa vokatra maro avy amin'ny voany.
Tips gardeners: Afaka manasa karaoty alohan'ny hametrahana fitahirizana?
Ny karoty dia iray amin'ireo legioma salantsalany indrindra eo amin'ny latabatrao. Ahitana vitamina, mineraly ary antioxidants. Mba hahazoana tombontsoa amin'ny karaoty, tsy amin'ny fahavaratra fotsiny ihany, fa amin'ny ririnina, dia mitahiry ny fitehirizana azy. Ny fitehirizana karakôry amin'ny ririnina dia sarotra kokoa noho ny legioma hafa. Noho izany, eritrereto ny tabilao mialoha, amin'ny lohataona, rehefa misafidy ny voa mety ho an'ny fambolena.
Ny fomba tsara indrindra hitahirizana ny karaoty amin'ny ririnina sy ny fomba fandoroana sy famokarana legioma
Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, te-hampifaly ny tenanao amin'ny legioma vaovao sy mangatsiatsiaka ianao. Karoty mamy tsara no tian'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Io legioma marevaka io dia manankarena vitamina sy mineraly, ary rehefa ririnina, rehefa tsy ampy sakafo ny vatantsika, ny fihinanana karaoty dia tsy ho matsiro fotsiny fa ho salama ihany koa. Vakio bebe kokoa momba ny fomba hitahirizana ny karaoty ao amin'ny lahatsoratra.
Mofomamy tsara! Ahoana ny fomba handraisana ny vary amin'ny polarisika multicooker?
Miaraka amin'ny fahatongavan'io fitaovam-pitandremana io - fitaovana tena ilaina ho an'ny ankohonan'ny ankamaroan'ny vehivavy - maro ireo karazan-tsakafo ho an'ny fanomanana ny sakafo mahazatra sy tsy mahazatra. Na ny vary aza dia azo atao anaty vilany iray mahagaga - mamoaka malefaka sy mamy izy io. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny endriky ny katsaka isika ao anaty lavaka mangatsiaka ary manoritsoritra amin'ny antsipiriany ny fizotry ny sakafo.
Ny lisitr'ireo fomba mahomby hamonoana ny karaoty amin'ny ririnina any an-trano, raha tsy misy trano fidiovana
Ny karaoty - dia iray amin'ireo legioma malaza indrindra, izay manana tanjona iraisam-pirenena. Azonao ampiasaina amin'ny endrika vaovao sy voankazo, ary voatahiry mandritra ny lohataona. Matetika ny legioma no voatahiry ao amin'ny lakaly, fa tsy ny trano rehetra no manome azy ireo. Tsy antony ny handao ny fijinjana, satria afaka mamonjy ny bika aman'endriny sy manandrana miaraka amin'ny fomba hafa mahomby.
Manao ahoana ny habetsahan'ny mahandro mofomamy ao anaty cooker: toro-hevitra mahasoa
Ny fitaovana fanenomana dia iray amin'ireo fitaovana fikarakarana tranainy indrindra izay ilain'ny mpivady rehetra. Noho ny fonony hermetic dia misy tsindrim-peo misongadina, ary avo be ny mari-pana. Noho izany, afaka mahandro sakafo isan-karazany haingana ianao. Matetika izy io dia ao anaty fitaovana fisakafoanana izay mofomamy.
Ahoana no handrahoana sy hoso-doko maitso?
Ny voanio voatsabo dia iray amin'ireo sakafo tena mahafinaritra amin'ny ankizy ary na dia ny olon-dehibe aza. Saingy miangona indrindra eo amin'ny sehatry ny tsy fahampian-tsakafo izany. Io vokatra mamy sy mamy io dia tsy mora ny manomana, fa misy ihany koa ny zavatra ilaina ilaina amin'ny vatany. Ary mba hahatonga ireo sombiny hitazona ny fananany rehetra, ilaina ny mahafantatra ny fomba fisafidianana azy ireo marina sy ny habetsaham-boankazo amin'ny savony.
Azo atao ve izany ary ahoana no fomba hihazonana ny karaoty ao an-jaridaina hatramin'ny lohataona: algorithm amin'ny dingana isan-tsainy, toro-hevitra amin'ny fisafidianana ny karazana sahaza
Ny karoty dia karazan-tsakafo maivana ary tsy dia sarotra ny maniry ny vokatra toy ny miaro azy io mandra-pahatongan'ny lohataona. Ny fomba fitsapana ny fotoana fametrahana legioma ao amin'ny zaridaina dia misy karazany maromaro miavaka. Inona avy ireo fotodrafitr'io teknolojia io? Mianatra bebe kokoa ao amin'ny lahatsorantsika isika. Ny endriky ny fotony, izay manan-danja amin'ny fitehirizana amin'ny ririnina, dia tafiditra ao anatin'ny vondron'ny fambolena fototra miaraka amin'ny tavy matevina manify (peeling).
Ny mari-pana ilaina amin'ny fitahirizana ny karaoty: ny maha-zava-dehibe ny ambaratonga, ny fahasamihafana eo amin'ny varieties sy ny nuances hafa
Ny karrot dia vokatra legioma iray izay iray amin'ireo vitsivitsy mety amin'ny fikarakarana maharitra. Mba hanaovana izany dia afaka mampihatra fomba isan-karazany ianao, ny safidy amin'izany dia voafaritra amin'ny fanirian'ny tena manokana ny zaridaina, ny trano sy ny karazana voankazo samihafa. Ankoatra izany, zava-dehibe ny mamorona ny fepetra feno ho an'ny fiarovana ny fampisehoana ny karaoty, anisan'izany ny filaminana ara-pahasalamana marina.
Ny fomba tsara sy ny hafiriana dia ilaina ny manondraka ny katsaka ao anaty saosy iray tsy misy koveta: resipe sy toro-hevitra
Ny katsaka dia sakafo tena tiany amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny voamadinika voaomana tsara dia malefaka, mamy ary tsy mahafa-po amin'ny tsiro. Ahoana no handrahoana ny katsaka, eo amin'ny vatany na tsia? Mamolavola ny katsaka ao anaty saosy iray tsy misy kofehy. Misy karazana fitsaboana marobe izay afaka manome fahafaham-po ny fanirian'ny tsirairay.
Tsy fantatrao ve ny haingon-tsakafo haingana ao amin'ny mikrô, ao anaty fonosana? Hilaza aminareo izahay!
Fantatry ny rehetra fa ilaina ny mihinana legioma araka izay tratra. Manan-karena amin'ny vitamina, fibre, ary singa marindrano izy ireo. Raha misy olona afaka manao tsy fihinanan-kena sy biby miaraka amin'ny fandrindrana ara-drariny ny sakafony, dia mety hitondra voka-dratsy eo amin'ny vatany ny tsy fisian'ny legioma ao amin'ny sakafo.
Famolavolana sakafo avy amin'ny mamy: ohatrinona ny mahandro ny kabine nefa tsy manimba ny tsirony sy ny tombony?
Ny Corn dia fantatra amin'ny olona mandritra ny 10 000 taona eo ho eo, tia firenena maro izy io, manampy amin'ny karazan-tsakafo rehetra ary mihinana izany tahaka izany. Ny katsaka dia ankafizina noho ny tsirony sy ny fahasalamany ara-pahasalamana, noho izany, rehefa manomboka mivarotra kobam-bolo amin'ny fahavaratra amin'ny elany rehetra dia sarotra ny manohitra ny tsy mividy ary tsy manandrana ny voa novonoina.
Ahoana no atao maina ny karaoty ao anaty lafaoro, mamonjy ny vitaminina?
Ny karazam-borona dia iray amin'ireo fitaovana mahazatra indrindra amin'ny sakafo. Ampiana amin'ny sakafo voalohany sy faharoa, kitay, manomana salady sy sira. Fa ny fakan-javakanto dia tena lafo amin'ny resaka fitahirizana. Mba hahafahany hankafy ny tsirony ary efa notehirizina nandritra ny fotoana lava dia ilaina ny mijery fepetra maromaro - avy amin'ny safidy amin'ny karazana mety ho an'ny "lava" lava lava, mba hanomanana ny efitrano izay "ahodin'ny zavamaniry".
Karazam-bolo mitahiry ny ririnina: ahoana no hanapahana sy hanomanana tsara azy?
Anisan'ny fambolena zaridaina hafa, ny karaoty dia miseho ho toy ny legioma izay sarotra indrindra hitahirizana ela. Mety misy antony maro mahatonga ny ririnina tsy ho ririnina: avy amin'ny teknikan'ny fambolena tsy ara-dalàna amin'ny fambolena avo lenta ao amin'ny lakaly. Kitapo mangarahara ho an'ny teknolojia amin'ny fitehirizana karoty - voankazo mialokaloka.
Voa varimbazaha: fomba tsara indrindra hividianana?
Tian'ny ankamaroan'ny zavamaniry - katsaka - tsy misy antony iray antsoina hoe "mpanjakavavin'ny tany." Ny vitaminina sy ny mineraly ary ny tsirony mahafinaritra dia manamboatra sakafo maitso (antsoina koa hoe katsaka) fa tsy fanomezana fidirana amin'ny latabatra fotsiny ihany, fa koa trano fitehirizam-bokatra ho an'ny vatan'olombelona. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo karazana fototra mahavariana mahavariana, fomba fampiasana sy fametrahana azy.
Miondrika araka izay tokony hataony izy ireo na hanangom-bokatra amin'ny fanjonoana amin'ny karpaty sy trondro hafa: mizara tsiambaratelo isika
Corn - nangataka fanjonoana any amin'ireo trano fitehirizana samihafa. Izy io dia manazava ny lazain'ny vidiny ambany, ny fahafaha-misaina ary ny fahombiazan'ny paosy. Ny corn dia manintona ny trondro indrindra amin'ny alokaloka manankarena, fofona sy tsiro matanjaka. Ho an'ny fanala dia mampiasa voamadilo na voasesika voajanahary, voankazo misy voankazo na artifisialy.
Ahoana ny fomba itazonana ny karaoty amin'ny siny sy ny boaty ho an'ny ririnina. Torohevitra momba ny zaridaina za-draharaha
Misy karoka foana eo amin'ny talantalana amin'ny ririnina. Izy io no manome ny sakafo menavava amin'ny ririnina amin'ny karazan-tsakafo mahasoa. Napetraka ao anaty lasopy, salady, menaka fisakafoanana izy ary ampiana fanosotra mamy. Raha manana ny taninao manokana ianao na mividy karazam-bozaka marobe mialoha ny ririnina, raha mbola mendrika izany dia mila mianatra ny fomba fitehirizana izany araka ny tokony ho izy.
Top-fomba tsara indrindra ho an'ny angom-pahandroana ao amin'ny mikrô fiavaratra any an-trano
Ny katsaka dia vokatra manan-danja sy malalaka izay afaka miomana haingana sy tsotra raha tsy mampiasa ny vilany, rano ary fitaovana hafa. Sakafo, voankazo mahamay aorian'ny ahandroana azy amin'ny mikraoba. Ity sakafo ity dia azo raisina ho toy ny latabatra na toy ny sakafo tsy miankina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Olericulture